Nlekọta Orchid - site na ndụmọdụ ndị a, orchid gị ga-eto
Nlekọta Nlekọta - Otú E Si Akụ Ha Orchids | Ụlọ osisi
Kedu ka a ga - esi kwalite uto nke orchids?
Ihe kachasị emehie na nlekọta orchids
A na-akpọ orchids ma ọ bụ Orchidaceae ezigbo ewu ma gbasaa gburugburu ụwa.
Ezi nlekọta orchids na-elekọta
Orchids dị n'azụ ezinụlọ daisy, nke a na-akpọ Asteraceae, nke abụọ kachasị elu na mpaghara osisi bedecktsamigen.
A na-ewere ha dị ka ndị mara mma. N'ihi nke a, orchid bụ eze nwanyị n'etiti osisi maka ọtụtụ ndị na-ahụ okooko osisi.
Ihe dị iche iche nke orchid dị iche iche. Na mkpokọta, e nwere ụdị umu anumanu a mara mma 30.000. Ihe edere na-akọwa ụfọdụ ntuziaka na usoro maka nlekọta na iji njikwa nke orchids. Ọ na-ekwukwa banyere mmejọ nke nlekọta orchid na-emekarị.
N'ụzọ bụ isi, orchid dị mfe iji osisi nke na-adịghị achọsi ike.
Otú ọ dị, e nwere ihe ole na ole na-emehie na nlekọta orchid. Nke mere na nke a anaghị eme ma ọ bụ na-ahụ nke ọma, ihe ederede na-enye nkọwa gbasara otu esi eme ya.
Ulo nke orchid nwere ike na-akwalite ihu ọma na ọnọdụ ziri ezi. Nke a na-agụnye ịzụta ite osisi nke kwesịrị ekwesị maka orchid. N'ebe a, ite ite dị oké mkpa. Biko jide n'aka na ite maka orchid gị bụ nke kwesịrị ekwesị maka osisi ahụ.
Nke a pụtara na ikpu orchid ekwesịghị ibu oke. Nzube nke a bụ na ite osisi nke orchid na-enye nkwụsi ike. Otú ọ dị, n'ime ite buru ibu, nzube a agaghị emezu. N'okwu kachasị njọ, a gaghị akwado orchid ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi nnukwu ite ahụ. Otú ọ dị, nke a dị mkpa ka ifuru ahụ wee nwee ike itolite. N'okwu a, ohere ọzọ apụtaghị ibu, ma ndị ọzọ. Ọ na-ewute osisi ahụ ma ọ bụrụ na ịzụta nnukwu ite.
Ọtụtụ mgbe, a na-eme ndudue a ma kwenye na eziokwu ahụ na osisi ahụ ka na-eto eto ma na enyelarị nke a na mmalite. Otú ọ dị, nke a ga-enye osisi gị ihe dị mkpa maka ibu. Otu orchid nke na-enweghị nkwụsi ike n'ime ite ya agaghị eto nke ọma. Ya mere, biko rute obere ite. Naanị mgbe ahụ ka mgbọrọgwụ nke orchid nwere ohere ịkwado onwe ha kpamkpam.
Tụkwasị na nke ahụ, obere ite dị mma maka mmiri a ga-agbanye. N'oge a, ekwesiri iburu n'uche na orchids enweghi nnukwu oke mmiri. Ya mere, ọ dị mma maka obere ite nke ị na-akụ mkpụrụ orchid gị, nke ị na-ejikwa mmiri dị ntakịrị. Ya mere, ị nwere ike ịchekwa nsogbu ndị ga-ejikọta na nnukwu ite.
ego nke mmiri
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime nsogbu ndị a bụ na mgbe oke mmiri dị elu, orchid enweghị ike ịṅụcha mmiri kpamkpam. Mmiri ahụ na-abanye n'ime osisi ahụ. N'ihi ya, mgbọrọgwụ osisi ahụ agaghị adịgide adịgide. Ọ bụrụ na anaghị achọpụta ọnọdụ a n'oge, osisi ahụ na-arịa ọrịa. Nke a gosipụtara n'onwe ya n'eziokwu na mgbọrọgwụ na-ere. Ọnọdụ a dị oké egwu maka orchid. N'oge a, o nweghi ike inye onwe ya nri ndi ozo. Ọ bụrụ na amaghị ọnọdụ a, osisi ahụ nwere ike ịnwụ. A ghaghị izere nke a mgbe niile. Biko jide n'aka na mmiri adịghị n'ime ite ahụ.
A na-agbanye osisi - oke mmiri
Dịka osisi ọ bụla ọzọ, ọ dị mmiri mkpa ka mmiri na-adị ndụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na orchids esiwo na-enweghị ike ịnapụta mmiri dị ukwuu n'ihi na ha nwere ezigbo ihe onwunwe, ọ bụ ihe dị mkpa ka usoro ọgwụgwọ dị mma.
Kedu ka m ga esi eche maka orchids m ifuru?
Mgbe agbanyechara mgbọrọgwụ ahụ, a ghaghị iwepu mmiri fọdụrụ. Ma ọ bụghị ya, a na-egwu osisi ahụ ọnwụ. Ya mere, ihe ize ndụ nke osisi a na-eme bụ nnọọ ihe ize ndụ nke osisi na-ehichapụ. N'ihi àgwà ya, orchid nwere ike ịdị ndụ nke ọma n'enweghị mmiri ruo ogologo oge. Ya mere, ezi nkedo bụ alpha na omega nke nlekọta orchid.
2) Orchid abụghị anyanwụbather - ezigbo anyanwụ nke ọma
N'adịghị ka ọtụtụ osisi ndị ọzọ, orchid na-amasị anyanwụ, ma ọ bụ naanị na ntanye. Orchids ndị dị ogologo n'anyanwụ, na-echebara ya echiche site na ịchọta ebe gbara ọchịchịrị. Nke a adịghị mma ma osisi ahụ adịghị eche ihu. N'okwu a, ị ga-achọ ebe ọhụrụ, ebe nchekwa maka ifuru. Ọtụtụ ìhè na - enyere orchid aka, ma ọ bụghị ìhè anyanwụ kpọmkwem.
3) Uwe oyi - ọ bụghị n'elu kpo oku n'oge oyi
Ikuku n'ime ụlọ ekwesịghị ịdị ọkụ, n'ihi na nke a adịghị amasị orchid. Ọ na-achọ ikuku ọkụ ma dị jụụ. Iji mepụta iru mmiri, dịka ọmụmaatụ, osisi ahụ nwere ike ịgbanye mmiri. Otú ọ dị, nke a bụ nanị obere oge. Onye na-enye okpomọkụ na osisi ahụ n'oge oyi site na itinye ya n'elu igwe ọkpọ. Ma, ikuku a na-ekpo ọkụ na-emerụ orchid ahụ, n'ihi na ọ na-ebelata mmiri dị oké mkpa.
4) Kpachara anya mgbe ị belata - mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ dị mkpa maka orchids
Ihe nlekọta ọzọ na-eche banyere mgbọrọgwụ ndị na-esi n'ite ahụ pụta. Ndị a adịghị mma ile anya. Otú ọ dị, mgbọrọgwụ mbara igwe dị mkpa maka orchid. Ha bụ ebe etiti osisi ahụ, n'ihi ya kwa, ha na-ahụ maka nri edozi. Enwere otu ihe: ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ rere ure ma ọ bụ nwụọ, ha nwere ike wepụrụ.
5) Fatịlaịza fatịlaịza ziri ezi
Orchid nwere ihe dị ntakịrị ihe dị mkpa. Osisi ahihia nke osisi sitere n'April rue September. Naanị n'oge a, a ghaghị ịbaa osisi ahụ okpukpu abụọ karịa ọnwa abụọ. Mgbe fertilizing adịghịzi mkpa, ya mere a ga-ahapụ ya.
6) Adịghị agbanwe okpomọkụ dị oke
Orchid ahụ hụrụ àgwà ahụ n'anya. Nke a na-emetụta oke okpomọkụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe n'ime ụlọ nke orchid na-adị ndụ, ọ naghịzi adị mma ma kwụsịkwa okooko. Iji gbochie nke a, a ghaghị ilebara anya na ime ụlọ okpomọkụ dịka otu ihe ahụ n'afọ.
Aha ụmụaka na ihe ha pụtara | mmekorita
Igwe nnụnụ na-agba agba na-azụ ụmụ ya
Ibe akwụkwọ agba agba
Iyi akwa orchids maka ndi okenye
Osisi na ubi
Nnukwu agba agba / Hercules Shrub - Osisi ndị na-egbu egbu
Na-agbanwe akwụkwọ osisi
Mkpụrụ osisi na-egbu egbu maka ụmụaka
Ambrosia - osisi na-egbu egbu
Ezigbo ụlọ na ebe niile
Nru na-akọwa kọwara nkwụsị site na nzọụkwụ
Ọrịa na oyi - mere?
Ịkwọ ụgbọala na oyi